Sebenzisa ubuNtu obuninzi kwaye uphephe iCaptcha | Martech Zone
Sebenzisa ubuNtu obuninzi kwaye uphephe iCaptcha
NgoMgqibelo, Julayi 14, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Mhlawumbi lelinye lawona mava mabi omsebenzisi endiqhubeka nokungena kulo kwiwebhu prince te knoloji.
I-Captcha kuxa umfanekiso wenziwe ngamanani, iileta, kwaye ngamanye amaxesha amagama kufuneka uthayiphe kwakhona kwenye intsimi. Oku kukuthintela iifom ezizenzekelayo kwifom spammers. Kuba abanakho ukucacisa ikhowudi, abanakho ukuhambisa iiposti.
Itekhnoloji yokuphazamisa. Andikwazi ukukuxelela ukuba mangaphi amaxesha endiya kungenisa ngawo okanye ndithumele umyalezo kwindawo ethile kwaye ndiphazanyiswa yintsimi yeCaptcha. Imisa ukuhamba kwaye imise amava omsebenzisi. Andikwazi ukuyimela. Ngamaxesha athile, ndiye ndincame ndiyeke ukundwendwela indawo okanye ukusebenzisa isixhobo.
Yenziwe yikhompyuter. Inyani yokuba iveliswe yikhompyuter indixelela ukuba ngenye imini iya kwaphulwa yikhompyuter. Kuphela nje umcimbi wexesha.
Yiyo Uvila. Endaweni yokulungisa ingxaki, yenza ukuba umsebenzisi asebenze eyijikelezile.
Abantu abambalwa bandibuze ukuba kutheni ndingakhange ndisebenzise iCaptcha xa ndibhala iplagi yam yeFom yamaNqaku Khange ndiyisebenzise kuba ndifuna ukwenza amava bhetele, ayibi mbi, ngelixa kuthintelwa spammers. Ngobuchule nje obuncinci benkqubela phambili, iinkampani zesoftware zinokwenza ukuba le mingeni ibe mnandi, hayi ukuphazamiseka.
Umceli mngeni wam kumbuzo wam iphepha loqhagamshelwano ilula kakhulu, "igama lokugqibela kwisihloko sebhlog yam". Kodwa yenza ukuba umntu ajonge umzuzwana kwaye mhlawumbi ade ahleke, ukuba kufuneka bangene "kwibhlog". Kulungile kwaye kulula. Akukho bumdibaniso bumdaka, okhutshiweyo, umdibaniso wacky wonobumba kunye namanani. Umbuzo nje olula ongenakuphendulwa yikhompyuter- ngumfundi kuphela.
I-Facebook ngoku isebenzisa iCaptcha
Inkampani yamva nje ukuba lixhoba lobuchwephesha besitayile seCaptcha yile Facebook. Ayisiyiyo kuphela iliso elipheleleyo, awunakufunda kwanto into edangileyo. I-Facebook ibintle kakhulu ekuphuhliseni izixhobo ezithile ezipholileyo kunye nokudityaniswa kwindawo yabo ... ngaba ngenene kufuneka basebenzise obu buchwephesha bobuchwephesha? Kubi ngokwaneleyo ukuba i-typepad kunye nabanye bayathengiswa kuyo.
Abanye banokuthi "iyasebenza". Isebenza kuphela kwimbonakalo yokuba isusa ingxaki kwiwebhusayithi kwaye iyibeke kumsebenzisi. Uyilo olungenakuxolisa kwaye kukho iindlela ezingcono! C'mon Facebook… thatha ithuba, qamba into! Yenza ubuchule.
Esi sisipho, kweyonaPosti yeBlog inkulu eMhlabeni…
Esinye isisombululo esitsha esifana ne-captcha's yi-HumanAuth (kunye neKittenAuth). Ikwafana "negama lakho lokugqibela kwisihloko sebhlog yam" umbono. Umntu kufuneka afunde umkhondo kwaye aqinisekise ukuba bayaziqonda iisemantics zekhonkco. Akukho khomputha inokuyenza loo nto, okwangoku. Kodwa ukuba umamela abantu be-AI, baya kuthi, kungekudala! Kukujikeleze ikona, ngenene!
Ukuba i-HumanAuth okanye into “esemgangathweni” engenakho ukwenziwa ziikhompyuter inokuzibamba zize zisetyenziswe ngokubanzi, oko kuya kunciphisa ukuphazamiseka othetha ngako.
KODWA, kusafuneka ulumke ekuphumezeni. Isampulu ka-HumanAuth endivele ndaya kujonga kwakhona inesiphene! Okwangoku ucofa imifanekiso emi-3 elungileyo, utshintsha iqhosha ukukwazisa ukuba ulungile. Kulungile, kodwa ikunika ukucofa okungasikelwanga mda, ke into elula ephindaphindayo yokufumana kwakhona inokuyifumana imifanekiso emi-3.
Uluvo lwakho lulula kwaye kulula kuhlala kuthetha ukuba kuncinci okunokuhamba gwenxa.
Jul 15, 2007 ngo-6: 57 AM
Bendingazi ngeHumanAuth kunye neKittenAuth… ndiza kujonga kwezi teknoloji!
Ayikuxeleli ukuba unayo "ilungile" ikuxelela nje ukuba unemifanekiso emithathu ekhethiweyo.
Jul 15, 2007 ngo-5: 40 AM
Uluvo olunomdla, nangona ndingaqinisekanga ngenene ukuba luyinto yebhlog yakhe…
Kodwa yintoni umntu angayenziyo ukujonga nje kancinci… 😉
Ngapha koko, indawo yethu (http://ajaxwidgets.com) ayinayo i-captcha yenkqubo yethu yebhlog. Kwaye inyani kukuba i-99.99% yazo zonke iibhlog zogaxekile ziyaliwa yinyani elula yokuba asiyivumeli i-HTML…!
Ukongeza sisebenzisa "ikhonkco zonxibelelwano" kumhlaba we-URL osusa uninzi logaxekile. Ayisiyiyo yonke loo nto inzima 🙂
Jul 15, 2007 ngo-6: 50 AM
Injongo yam yayingeyiyo ingqalelo, uThomas. Ngokwenyani kukuzisa ingqalelo kwitekhnoloji 'eyamkelekileyo' eqhelekileyo kodwa ayisebenziseki.
Umzekelo wakho wendlela ojongana nayo yeyona nto ndiyithethayo, ngokuqinisekileyo zikho iindlela ezimbalwa zokujongana nengxaki.
Enkosi, Thomas! Kwaye ndiyazithanda iiwijethi, ke ndiza kujonga indawo yakho!
Jul 15, 2007 ngo-6: 45 AM
Uyasilela ukukhankanya ii-captcha's ezingadinwanga kwaye ziyinyani egqwethekileyo esekwe kumfanekiso wesicatshulwa.
I-captcha inokuba zizinto ezininzi, isicatshulwa esisekwe, umbuzo kunye nempendulo, i-subjective (khetha eyona njana inqabileyo) kwaye ezi zikhawuleza ukuzisebenzisa kwaye zivakale ngakumbi ukuzama ukuqonda ukuba ngaba ngu-o okanye u-0.
Ndivumelana nawe, kwaye ndiyabacaphukela nabo, kodwa iposti yakho ayikhange igubungele ububanzi besihloko, kwaye khange unikeze naziphi na izimvo malunga nendlela yokulungisa.
Jul 15, 2007 ngo-6: 54 AM
Ndiyavuma - Khange ndize nesona sisombululo sisiso… nantso into endiyibizayo ziinkampani ezinezixhobo ezifanelekileyo kunye neengcali zamava omsebenzisi. Inkuthazo yam yokubhala lo myalezo emva kokubona i-Facebook isebenzisa obu buchwephesha.
Andikhange ndiqonde ukuba ubuchwephesha beCaptcha bugqume ngaphaya komzobo wefonti olula ekufuneka ungeniswe ngumsebenzisi. Ukuba itekhnoloji yeCaptcha yandisa unyawo lwabo kwimibuzo ecelomngeni kunye neempendulo ezinokuthi zenziwe ukuphucula, hayi ukuthotywa isidima, amava omsebenzisi, ndibafanele!
Jul 15, 2007 ngo-7: 25 AM
Sebenzisa amagama aguqukayo. Nje ukuba umsebenzisi eze kwiphepha asete ikuki yeseshoni enenombolo engahleliwe. Emva koko nika igama lakho "lokufaka" igama = "hlomla __ [isihloko]", kwaye ke elinye lamasimi akho onke.
Emva koko setha inombolo ngalo lonke ixesha umntu etyelela iphepha.
Oko kuyakuqinisekisa ukuba ngumntu ongumntu oya kwiphepha: okwexeshana.
Jul 15, 2007 ngo-7: 48 AM
Ndivumelana ngokupheleleyo nawe. I-CAPTCHA ziintlungu kwi…
Nangona kunjalo, kulula ngokwenene ukubhala i-CAPTCHA engabonakaliyo eyenza ubuqhetseba. Zininzi iindlela zokwenza.
Jul 15, 2007 ngo-8: 57 AM
IiCaptcha's zinokucaphukisa. Abanye ngaphezulu kwabanye. Ndizibonile ezinye ezingenakwenzeka ukuba zifundwe (ezoyisa injongo). Ndisebenzisa uhlobo "olubi" lweCaptcha oluchaze kwiiprojekthi ezimbalwa. Nangona kunjalo, ndenza kube lula ngokwaneleyo ukuba ndifunde ukuze umntu angayi kuphikisa ingqondo yakhe ukuze aqonde. Kananjalo, ndingu "captcha" kuphela xa umsebenzisi ebhalisa, hayi ngalo lonke ixesha befaka igalelo kule ndawo. Ayisiyo inkqubo egqibeleleyo, kodwa ndiyithatha njengephantsi kwimo yokucaphukisa komntu.
Apho uya khona, sinokuqala ukukala iiCaptcha's kwi "HAF" yabo (iFactor Annoyance Factor), iSmammer Annoyance Factor, njl.
Jul 15, 2007 ngo-9: 13 AM
I-Captcha vs HAF. Ndiyayithanda lo nto!
Andifuni ukuthothisa iplagi yakho kodwa sele ikhona indlela ebhetele yokuhluza ugaxekile kwi-wordpress. Kukho iplagi emangazayo endiyisebenzisayo ebizwa ngokuba yiSpamKarma kwaye ndisebenzisa zonke iintlobo zokwenza izinto ukumisela ukuba le post ukuba yeyomntu na okanye yeyogaxekile. Kudala ndiyisebenzisa malunga ne-1/1 okanye iminyaka emi-2 ngoku kwaye yakha yakhombisa izimvo zomnye njengogaxekile kwaye yakuba ingaqinisekanga yacela umntu ukuba agcwalise i-captcha emva koko avumele amagqabantshintshi. Ibamba amakhulukhulu ezimvo zogaxekile ngeveki nangona ingaze ivumele nanye ukuba ingene.
Ndizicaphukela ne-captchas ngokunjalo. Ukuba ngenene kufuneka ndibhale i-captcha ndingayenza http://www.hotcaptcha.com/ ukusukela ekukhetheni abantu abahle okanye izilwanyana ezinoboya okanye izinto eziphuma kuthotho lwemifanekiso yinto engenamsebenzi ebantwini kwaye inzima kakhulu kwizikripthi ezizenzekelayo.
Andisebenzisi SpamKarma kodwa ndivile ngayo. Ndisebenzisa indlela yokuziphatha engalunganga kwaye kusenokwenzeka ukuba ndijongane ne-10% yezimvo zogaxekile ebendinazo ngaphambili.
Ndiza kujonga i-Hot Captcha-izandi ezifanayo kwinto endifuna ukuyibona.
Esi sithuba asinantsingiselo. Isisombululo sakho asilinganisi. "I-bot" inokucwangciswa ngokulula ukuba idlule kwinqanaba lakho lokhuseleko ngokugcwalisa "ibhlog" ngalo lonke ixesha. Isisombululo sinombuzo ophelileyo-imibuzo emininzi okhathalayo ukubhala. Ifacebook, umphathi wetikiti, okanye i-yahoo ingasisebenzisa njani isisombululo?
Esi sithuba sasinokuhlekisa ngokwaneleyo ukuba siqwalaselwe kwaye siqhubele phambili ingeniso yakho yentengiso. Kuya kufuneka uzame nzima "ukucebisa" le bhlog. Ndiza kuqala ngomxholo ofanele ukufundwa.
Wowu, Mat. Umntu othile uvakala ngathi unomsindo kancinci namhlanje.
Izandi ngokungathi khange uyifunde ngokwam iposti yam. Khange nditsho ukuba isisombululo sam siza kulinganisa kwaye akufuneki sisetyenziswe zezi nkampani. Mna wenza yithi ndingathanda ukubona ezinye iinkampani (ezinjengeFacebook) zize nesisombululo esikrelekrele ngakumbi. Iplagi yam iyakuvumela ukuba utshintshe umceli mngeni kwaye uphendule nanini na xa ungathanda- akukho bot iya kuqhubeka nayo. Ukuza kuthi ga ngoku, bendingenayo i-SPAM kwiphepha lam lokunxibelelana kwesi sisombululo.
Umzekelo omnye: Mhlawumbi i-Facebook inokufumana inzuzo ngokusebenzisa intengiso ephepheni kwaye ibuze ukuba "Ngubani isikhangiso esikweli phepha?". Nantoni na ibhetele kunokubetha iqela lamanani kunye neeleta- ukuba ungazifunda.
Masinwabe! Qiniseka ukuba urhume! hehe
Jul 16, 2007 ngo-9: 12 AM
Intengiso "Ngubani okweli phepha" ngumbono onomdla. Ndikhe ndayibona iphunyezwa ngaphambili kwiwebhusayithi ebizwa ngokuba yiMoola.com. Nangona kunjalo, bayisebenzisa ngokukodwa njengendlela yokwalathisa ingqalelo kubathengisi babo (njenge-interstitial) kunendlela yothintelo logaxekile.
Abanye babo banokukunyanzela ukuba ubukele ividiyo yeentengiso ezingama-20 emva koko uphendule umbuzo onje ngokuba "Yayenzelwe eyiphi inkampani le ntengiso?" Ngelixa ndingenguye umlandeli wale ndlela (ndiyakucaphukela ukulinda), kunokuba ngumdla ukubona ukuba yintoni into enjalo eyenzayo kwingeniso yentengiso.
Ngaphandle kwento yokucaphukisa, enkulu, ii-CAPTCHA zihlala zingenakufikeleleka kuye nakubani na onombono ongaphantsi kokugqibeleleyo.
Khawufane ucinge i-CAPTCHA ofumanisa kunzima ukuyifunda emva koko uvumele umntu ongaboni kakuhle ukuba ahambe. Ngaba kunzima? Phantse akunakwenzeka.
Ungathini ngomntu ongenambono konke konke, evula iwebhu ngesifundi sescreen okanye itekhnoloji ye-braille. I-CAPTCHA yenzelwe ukuba iinkqubo zingakwazi ukuyifunda. Kule meko, nomsebenzisi okhubazekileyo akanakho.
Zimbalwa iiCAPTCHA ezifikelelekayo, ezibandakanya ilizwi le-CAPTCHA kwabo bangaboniyo ngumzekelo, kodwa ukongezwa kokusebenza kokukhathazeka kuyenza itekhnoloji endingenakuze ndiyicinge yokuyisebenzisa. Beat the spammers ngenye indlela, musa ukwenza abasebenzisi bakho bokwenyani bahlawule (nesizathu sokuba ndisebenzise iplagi elandelayo).
I-Captchas azibi. Ii-captchas ezimbi zimbi. Ukuba kunzima ukufumanisa ukuba awukwazi ukuyifunda, oko kubi.
Nangona kunjalo ndicinga ukuba isisombululo esingcono ngumbuzo osisiseko wezibalo, izinto ezintathu eziguquguqukayo:
1. Inani 1 (0-9)
2. Inani 2 (0-9)
Yenziwe ke ukuba izibalo zilula kakhulu, kwaye ungafumanisa ukuba yeyiphi impendulo evela kumbono weskripthi ngokulula.
Jul 16, 2007 ngo-9: 13 AM
Isisombululo esinye esicocekileyo endidibene naso kwenye indawo yayiyibhokisi yokukhangela enombhalo othi "Ndingu-spammer", ongakhange ujongisiswe ngokungagqibekanga. Kuyavunywa, kuluncedo ngakumbi kumxholo wokuthintela ukusayina okuzenzekelayo kunamagqabantshintshi (njengoko amagqabantshintshi ebhlog ahlala engenazo iibhokisi zokukhangela ezifuna ukukhangelwa).
Ewe ekugqibeleni, ngumcimbi wexesha ngaphambi kokuba ii-AI zikuphule oko. Kodwa andicingi ukuba sisisombululo esigqibeleleyo kunokuba iirobhothi zingasoze zaphule, ke oku kulungile kwaye akuphazamisi amava omsebenzisi kwaphela (ngaphandle kokuba, ngokuqinisekileyo, uzijonga njengogaxekile…)
Jul 16, 2007 ngo-9: 18 AM
Athini la magqabantshintshi malunga nokuba oku "kuthathelwa ingqalelo"? Ukusukela nini into embi ukongeza ilizwi lakho kwingxoxo. Heck, ngezimvo ezili-17 sele zicacile, ngokucacileyo sisihloko abantu abanomdla kuso.
Ngaphandle koko, ukuba esi sisihloko esitsala umdla wabantu, kutheni u-heck ungafuni_ubhlog malunga nayo?
Jul 17, 2007 ngo-11: 34 AM
Njani le ayisiyo-CAPTCHA?
Kuyinyani, ayizizo iileta eziqhelekileyo ezibhalwe kumfanekiso we-gravy engeyonyani, kodwa yinto ekuzama ukuxelela ikhompyuter kunye nokuhlukana kwabantu.
Meyi 20, 2008 kwi-10: 55 AM
Ewe ndiyavuma ukuba ii-captchas ziyacaphukisa, kwaye ndiyaxolisa ukuqonda ukuba zingumqobo kubasebenzisi abakhubazekileyo, kodwa kutshanje nje
kugqogqiwe malunga nokuba ndibuxabisa kangakanani ubume be-reCaptcha system, kuba ibhloka ugaxekile (nangona ingeyiyo i-100% ngokufanelekileyo, njengoko usitsho) ngelixa unceda ukucacisa iincwadi, kwaye ndisengumlandeli.
Akukho kuphikisana nefuthe labo elibi kumava omsebenzisi, kodwa kuya kufuneka uvume ukuba ukusebenzisa umzamo omncinci kwilungu ngalinye lechibi elikhulu labantu ukwenza oko nokuba ikhompyuter ebukhali kakhulu ayinakho (funda isicatshulwa esineengcango esichasa ukuqondwa kwempawu yomntu) yinto entle isisombululo.
Nangona ndithetha nje ngokubanzi, ewe, konke ndisebenzisa ubuchule endaweni yekhowudi xa kunokwenzeka.
Iposti emfutshane emfutshane. Nam andivumelani namalangatye malunga nenjongo yesithuba sakho. Ingakumbi apho abanye babonisa ukusilela kwakho ukubonelela "ngempendulo" okanye "enye indlela," endinokufunga ukuba uyenzile ngefom yakho yeefom kunye nengxoxo ngephepha lakho loqhakamshelwano (okanye kukhona into endiyiphosileyo? Ndicinga ukuba abantu abaninzi yenza izimvo (kwaye wabelane ngazo) ngaphandle kokuzikhathaza ngokufunda nokuba yeyiphi na iposti emfutshane, enje ngale, ngaphambi kokuba ikhuphe (eyenzeka ecaleni kwento)
Le yingxoxo-mpikiswano enomdla kwaye, nokuba isisombululo siyenziwa, kufanelekile ukubhala malunga nokuba uyafuna. Yibhlog yakho, emva kwayo yonke le nto-yile nto indikhathaza kakhulu ngamanye amagqabantshintshi- ukusukela nini ukubhloga kuye kwaba luxanduva loluntu? Ukuba ufuna ukubhala malunga nento ethile, bhala ngayo. Nabani na ongafuniyo ukufunda usenokukhetha ukungayifundi. Ukuba ububiza umrhumo, eli ibiya kuba libali elahlukileyo, kodwa, ukuba ndichanekile, ii-weblogs ziveliswe kumnqweno wobunzima bokuthumela nantoni na kunye / okanye yonke into engena entlokweni yayo kwaye ikubeke ukubonisa uluntu, okanye ukwenza kube lula ukwabelana nabahlobo. Imixholo yeeeblogi ezininzi ayifikeleleki esidlangalaleni okanye inomdla nakwabo bangabandakanyekanga ngqo.
Kwafuneka ndihleke xa ndifunda malunga nokusebenzisa le post ukukhusela ingeniso yakho yentengiso. Mhlawumbi (kwaye ndiyathemba njalo) amava akho ebengcono kunam, kodwa-ngaphandle kokuba ubhloga ukwazisa imveliso-ungabhala malunga ne-captcha okanye ungabhala malunga nendlela ukutya kwenja enuka ngayo okuninzi kunye nenkqubo yakho yentengiso hlawula ngezinga eliqhelekileyo elingenakulinganiswa nakweyiphi na imeko 😉
Oko kuthethiweyo, ukuba abenzi beCAPTCHA bafunda, enkosi ngokongeza iaudiyo! Ibala elimnyama elimnyama elinombala omdaka wegridi omhlophe ongaphambi kwaso obhalwe ngumoya omhlophe (kunye nokuphosakeleyo) oonobumba (ngamanye amaxesha ngaphezulu komda womfanekiso) ngumzekelo ogqibeleleyo wemeko yokuba umntu onombono ohloniphekileyo uya kuba nzima ukucacisa, kodwa Inkqubo iya kusombulula ngokulula ngokuhamba kwexesha.
Iisenti zam ze-2 kuphela,